साक्षात्कार संग एक रूसी केटी जीवन बारे मा मेक्सिको ब्लग को यात्री
यसको विपरीत को आधुनिक शहर संग पुरातन संसारको भारतीय, र मिश्रण को धेरै संस्कृतिका मेक्सिको. हामी यो कुरा धेरै, र यो वर्ष पूरा गर्न पर्याप्त छैन उनको । एक राम्रो तरिका रहन र बाँच्न, मेक्सिको मा रूपमा गरे, उत्प्रेरित पटक देखि मास्को मा यो घाम देश । प्राप्त द्वारा प्रेरित रोचक कथा को स्थानांतरण को मा मेक्सिकन राज्य अमेरिका, उनको जीवन अनुभव र सल्लाह बारेमा बिदाहरू यो देश मा, जन्म र खडा मा मास्को. शिक्षित रूपमा एक पत्रकार र फोटोग्राफर, स्नातक पत्रकारिता संकाय को मास्को राज्य. र अब, दस वर्ष को मेक्सिको बाँचिरहेका छन् । यहाँ म मेरो आफ्नै व्यापार मा फोटोग्राफी र दुई छोराछोरी संग दोहोरो नागरिकता र मेरो पति छ मेक्सिकन. म सधैं एक फोटोग्राफर हुन चाहन्थे, र जब उहाँले प्रविष्ट पत्रकारिता संकाय मा, लामो र असामान्य, विदेशी देशहरुमा आकर्षित गर्न थाले किनभने मलाई म देखे पोर्टफोलियो, आफ्नो शिक्षक र साथीहरूको फोटोग्राफी. को कार्यशाला मा फोटोग्राफी युरोप मा म भेट एक मेक्सिकन फोटोग्राफर राउल. यो जानकारी मलाई नेतृत्व मेक्सिको. कसले सोचेको थियो कि दस वर्ष मा म बाँच्न मेक्सिको मा, हामी छौं, विवाह, दुई बच्चाहरु संग र एक परिवार फोटो स्टुडियो व्यापार । प्राप्त गर्न बाटो निवास र त्यसपछि नागरिकता मेक्सिको मा छ मेक्सिकन विवाह वा एक बच्चाको जन्म मा देश । तपाईं पनि जीवित देश मा कम्तीमा पाँच वर्ष को लागि आधिकारिक दर्ता मा काम गर्न र त्यसपछि फाइल लागि नागरिकता छ । वा, तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा लगानी मा देश को अर्थव्यवस्था र प्राप्त गर्न नागरिकता मेक्सिको मा. यो बस असम्भव तुलना । जीवन मेक्सिको मा धेरै फरक छ । उदाहरणका लागि, यहाँ हामी बाँच्न विशाल घर, बरु अपार्टमेन्ट. छोराछोरीको शिक्षा र भुक्तानी औषधी छ । सार्वजनिक परिवहन विकसित छैन, सबै कार द्वारा. शिक्षा र यसरी राम्रो काम उपलब्ध छैन सबै, त्यसैले यो ठिक फरक. यो पनि चलन छ हाउसकिपरको र एक, यो महंगा छैन, त्यसैले कसरी मान्छे देखि अन्य सामाजिक-आर्थिक पत्र । तपाईं हेर्न आवश्यक सबै कुरा. हेर्न सबै ठाँउहरु मेक्सिको मा तपाईं को आवश्यकता हुनेछ एक वर्ष कम से कम. जाडो जान राम्रो छ तट, र गर्मी को केन्द्र मा देश र शहर. किन । गर्मी मा मेक्सिको को वर्षाको मौसम, सागर सकिन्छ हुर्रिकानेस र लगातार भारी वर्षा । र जाडोमा शहर मा पनि चिसो समुद्र द्वारा तपाईं महसुस गर्नेछन् सबैभन्दा सहज छ । भिसा छ छैन आवश्यक छ । अब प्रयोग मुक्त इलेक्ट्रनिक प्राधिकरण, यो सम्भव छ. तपाईं अनलाइन दर्ता गर्न को वेबसाइट मा दूतावास छ । तिनीहरूले भन्न चाँडै यो हुनेछ रद्द गरियो । काम काम मात्र काम अनुमति संग, तपाईं गर्न आवश्यक दर्ता गर्न प्रवेश माध्यम देश देखि निमन्त्रणा रोजगारदाताले छ । मा स्पेनिश र अंग्रेजी मा हुनेछ हुन आवश्यक छ । मा पर्यटन क्षेत्रहरु मा, उदाहरणका लागि, क्यारिबियन, हेर्न को लागि काम मा पर्यटन को क्षेत्र.
मुख्य मतभेद स्थगित गर्न सबै लागि भोलि कहिल्यै, हुन समयनिष्ठ, न काम न त निजी जीवन छ । यो मित्रता र मुस्कान भनेर भन्दा बढी केही हो अभिव्यक्ति, मित्रता, धेरै रूसी मा पहिलो । वर्ग समाज कहाँ आफ्नो जीवन को गुणवत्ता र आफ्नो मनोवृत्ति अरूलाई के मा निर्भर गर्दछ सामाजिक वर्ग तपाईं हौं । यसैले त-भनिन्छ जातियता, तर संकेत को आय । एकै समयमा, परिवार उन्मुख, जिम्मेवार पति र बुबाले. र, को पाठ्यक्रम, प्रेम विदेशीहरू र उपासना सेतो छाला । — धेरै राम्रो छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र अमेरिकी यहाँ, साथै. मेक्सिकन देशभक्त, छैन ठूलो स्वरले आलोचना गर्न आफ्नो देश । के छैन प्रयास गर्न तिनीहरूलाई खुवाउन बोर्स्ट वा पकौडी, तिनीहरूले रुचि — एक परम्परागत पकवान को मेक्सिकन भोजन । सेतो संग केटी, नीलो आँखा, त्यसपछि मेक्सिकन पति मा आफ्नो खुट्टा छ । ठट्टा) वास्तवमा, जस्तै जताततै अरू, तपाईं हेर्न आवश्यक छ लागि, एक व्यक्ति संग यस्तै चरित्र र जीवन योजना छ । शिक्षा विभाजित छ, निजी कलेज र राज्य विद्यालय छ । अनिवार्य शिक्षा माथि वर्ग गर्न उच्च विद्यालय हो । सार्वजनिक विद्यालय मानिन्छ धेरै कम निजी छ, अक्सर वर्ग, छैन पर्याप्त शिक्षकहरू, व्यवहार को विद्यार्थीहरूको नियन्त्रण बाहिर छ — वेद धेरै छोराछोरी देखि गरिब क्षेत्र र विपन्न परिवार छ । निजी उद्यान को मेक्सिको, कलेज र विश्वविद्यालय धेरै राम्रो हो. त्यहाँ छ बच्चा आदर, त्यहाँ जान्छ आधा दिन सिक्ने मा अंग्रेजी र आधा स्पेनी मा. त्यहाँ अक्सर सिकाउन अतिरिक्त प्रजालाई: संगीत, कला, विज्ञान र अंग्रेजी मा.
निजी कलेज मेक्सिको मा तपाईं पाउनुहुनेछ हरेक स्वाद को लागि र बजेट । छोराछोरी ल्याए छन् त्यहाँ द्वारा कार — एक विशेष नर्स मदत गर्न छोराछोरीलाई बाहिर निस्कन वाहन र स्कूल प्रवेश जोगिन एक यातायात जाम मा अगाडि को गेट कलेज र सबै आमाबाबुले समय ड्रप गर्न बन्द आफ्नो बच्चाहरु मा समय छ । सबै पछि, स्कूल सुरु. छु । यस प्रश्नको जवाफ असम्भव छ । मेक्सिकन भोजन कारण यसको विविधता, अनुपालन परम्परा र को स्वाद, छ सूचीबद्ध रूपमा यूनेस्को द्वारा एक सम्पदाको मानवता को एक बराबर संग फ्रान्सेली । म सुझाव प्रत्येक क्षेत्र मा स्वाद को विशिष्ट भाँडा, विशेष गरी बजार मा सञ्चालन कि केही दिन, हप्ता । अनिवार्य सहित: राजदूत, तिल, धेरै प्रकार को उष्णदेशीय फल र बरफ क्रीम. यात्रा अद्वितीय अनुभव तिनीहरूले यति समृद्ध हाम्रो भित्री संसार बनाउन हामीलाई अधिक सहिष्णु गर्न विभिन्न तरिका को जीवन, प्रकट गर्न हामीलाई नयाँ पक्ष को संसार र आफूलाई । मेरो सपना छ गर्न सुरु यात्रा भर मेक्सिको र यो बताउन मेरो. तर्क छ, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो सहायक मा छुट्टी मा मेक्सिको. मेक्सिको मा, जताततै खतरनाक छ छैन साँचो जताततै मेक्सिको मा सुरक्षित छ झूट छ । ध्यान मा फोरम मा, स्थानीय काउन्सिल, आफ्नै. एउटै अंतर्ज्ञान उपयोगी हुनेछ छान्ने गर्दा एक ठाउँ भोजन लागि. देखे एक मजा स्थानीय भीड त्यहाँ पक्कै स्वादिष्ट छ, सस्तो छ, र छैन ।
← क्यामेरा मेक्सिको मा
डेटिङ साइट मा ब्राजिल, निःशुल्क सभाका लागि गम्भीर सम्बन्ध →